Ukuqeshwa kweBahamas I. UChester Cooper njengoMphathiswa wezoKhenketho oMtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » Ukuqeshwa kweBahamas I. UChester Cooper njengoMphathiswa wezoKhenketho oMtsha
Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
UMphathiswa wezoKhenketho kunye nezoPhapho eNtsha waseBahamas
Abaphathi kunye nabasebenzi be-Bahamas Ministry of Tourism & Aviation banikezela ngezandla ezishushu kuSekela-Nkulumbuso, oHloniphekileyo u-Chester Cooper, owonyulwe njengo-Mphathiswa wezoKhenketho, uTyalo-mali kunye noPhapho nge-17 kaSeptemba, kusuku olunye emva koNyulo Jikelele lwelizwe. Ukonyulwa kwekhabinethi ye-DPM Cooper yayiphakathi kweepotfoliyo zokuqala ezabelwe ulawulo olutsha lweqela eliqhubela phambili leLiberal, elaliphumelele kwizikhululo ngoSeptemba 16, 2021.
Umxholo wamazwe aphesheya kwezorhwebo ubaluleke kakhulu kulwandiso oluzinzileyo lwamacandelo oKhenketho, ezoPhapho kunye noTyalo-mali lweBahamas.
Amandla omphathiswa u-Cooper kunye nobukrelekrele kwezoshishino zezona zinto ziyimfuneko njengoko uMphathiswa eqhubeka nomnqweno wokubuyisela ukhenketho.
Umnumzana Cooper uthatha uxanduva lokwazisa abantu ngomsebenzi omkhulu ozayo.
UMlawuli Jikelele wezoKhenketho uJoy Jibrilu uthe: “Kwicandelo loMphathiswa Wezokhenketho sijonge phambili ngovuyo ekusebenzeni phantsi kobunkokheli obutsha boMphathiswa u-Cooper, oza kuzisa kubuPhathiswa bethu ubutyebi bolwazi kunye namava awafumene ebomini bakhe njengempumelelo inkokeli kwicandelo labucala. Amandla omphathiswa u-Cooper kunye nobukrelekrele kwezoshishino zezona zinto ziyimfuneko njengoko uMphathiswa wethu eqhubeka nomgomo wokubuyisela ukhenketho phakathi kwesifo esiqhubekayo. ”
UMphathiswa Cooper uyavuma ukuba wonke owona msebenzi uphambili kwi Bahamas Iqhutywa luluntu lwamanye amazwe kwaye ukuqonda imeko yezoshishino kubaluleke kakhulu kulwandiso oluzinzileyo loKhenketho lweBahamas, Amacandelo oPhapho kunye noTyalo-mali. Njengomntu ophumelele kakhulu kubunkokheli becandelo labucala, uMnu Cooper uthatha inxaxheba kwishishini lokuqala lesizwe ngokuqonda ngamandla ngomsebenzi omkhulu ozayo. Wonwabile ithuba lokunyuka aye kumceli mngeni kwinkonzo yelizwe lakhe alithandayo.
UMphathiswa Cooper ungoyena mncinci kwi-12 kwaye utshatile noCecelia Cooper. Ngabazali abanekratshi babantwana abathathu.
Imizabalazo yakhe yokuqala yamqhubela ekubeni abe nesibindi, omelele kwaye athobeke; Iimpawu ezamncedayo njengoko wayenyuka kwinqanaba lokudibana ukuba abe nguSihlalo kunye ne-CEO yeBAF Global Group kunye noMongameli kunye ne-CEO yeBAF yezeMali kunye neInshurensi (Bahamas) Ltd.
WayenguSihlalo wokuvulwa kweKomiti yeeNgcebiso nge-Inshurensi kunye noMlawuli osungula iNgxowa-mali yeVenture ye-Bahamas. Ulilungu loMbutho wooMongameli abancinci (i-YPO), i-Toastmaster eyaziwayo kwaye usebenza kwiiBhodi zabucala ezahlukeneyo.
Usekela-Nkulumbuso u-Chester Cooper liSekela leNkokheli yeqela eliqhubela phambili lenkululeko (i-PLP) kunye nelungu lePalamente ye-Exumas kunye ne-Ragged Island.
Iinkozo ezimbini ezizezona zintle kwiMbali yoQhagamshelwano lweHlabathi kunye...